PET Mabhodhoro Vagadziri - China PET Mabhodhoro Fekitori & vanotengesa
Hamuna mabhodhoro epurasitiki
Yedu yepamusoro yemhando isina mabhodhoro epurasitiki anoshandiswazve zvizere, akareruka uye giredhi rekudya rakatenderwa PET ipurasitiki ine girazi-rinotaridzika, iro rakanakira kusimudzira akasiyana siyana zvigadzirwa. Iyo yakajeka facade yegirazi inobvumira vatengi vako kuti vaone zvirimo - saka zvakanakira kurongedza zvinokwezva zvinwiwa kana mafuta.
Kutenda kuhuremu hwayo hwakanyanya Bhodhoro repurasitiki risina chinhu dhizaini, ndiyo inodhura-inoshanda uye inogadzikana kurongedza kunowanikwa pamusika. Mhinduro yekupayona iyi inotaura nezvemusika wemvura uchiri wemabhodhoro madiki ePET, kunyanya vagadziri vari kutsvaga kukwidziridza mutengo wavo wekurongedza uye wekugadzira.
Yedu Hamuna mabhodhoro epurasitiki inowanikwa kutenga nesarudzo hombe yekuvhara. Izvi zvinosanganisira ese marudzi epurasitiki kana ealuminium makapu ane kana asina liners.
Chikafu chegiredhi PET mabhodhoro
Shanghai COPAK inyanzvi yekutengesa mapakeji ezvekudya senge chikafu giredhi PET mabhodhoro, Kudya kwegiredhi PET makapu, chikafu giredhi rePET chikafu uye zvigadzirwa zvePLA. Inowanikwa muShanghai, guta rine hupfumi muChina, isu tine yakanyanya fashoni pfungwa yeChikafu chegiredhi PET mabhodhoro. Yakanaka kutakura chiteshi chegungwa, uye mazhinji epamberi ekugadzira mitsara.
Vatengi vanoziva nezve China vanogona kuziva kuti, Shanghai ine yakanyanya kuomeswa chiyero cheKudya giredhi mapakeji kugadzirwa. Kambani kubva kuShanghai mumabhodhoro egiredhi rechikafu munda unofanirwa kuve wakanakisa. Kubva pane zvakasarudzika kusarudza kugadzirwa uye pasuru, maitiro ese apera muguruva yemahara musangano. Vashandi vedu vese vanopfeka ngowani uye magiravhusi pavanogadzira muchina. Yedu otomatiki yekugadzira mitsara yechikafu giredhi PET mabhodhoro uye ita kuti vashandi vasununguke. Izvi Simbisa kuti vashandi vane mukana mushoma wekubata zvigadzirwa Iwe haufanire kunetseka nezvehunhu. Uye panguva imwechete isu tine mushure mekutengesa vimbiso yekuona kodzero yako.
Chikafu chepurasitiki mabhodhoro
Kana zvasvika pakutsvaga nekugadzira Chikafu chepurasitiki mabhodhoro, zvakakosha kuti unzwisise kuti ipurasitiki inoonekwa seyakachengetedzeka chikafu kana kwete. Hurumende zhinji dzinogadzira mirawo maererano nechikafu chepurasitiki. MuCanada, Health Canada inotarisira iyi mirau. MuUnited States, Chikafu neDrug Administration (FDA) inogadzira iyo mirau. zvisinei, vane zvakafanana zvinodiwa. Chikafu chepurasitiki giredhi chinofanira kusangana nemimwe miitiro yekuchena. Iyo haigone kuve nemadhayi, zvimwe zvinowedzera kana zvishandiswazve zvigadzirwa zvepurasitiki zvinofungidzirwa zvinokuvadza kuvanhu. Chikafu chegiredhi repurasitiki chinogona kuve nematanho emidziyo yakashandiswazve chero bedzi izvo zvinhu zvichikodzera iwo marongero nemirau yakatarwa nedare rinodzora.
French square bhodhoro
Yedu French Square Yakajeka Mabhodhoro mubatanidzwa wakanaka wekunaka & basa. Yadzo mativi nzvimbo-yekuchengetedza dhizaini inodiwa sezvo isingori chete inowedzera nzvimbo yekuchengetera asiwo kugona kuona izvo zvirimo uye chinyorwa. Mutumbi wakaenzana unobvumira kuti mabhodhoro aya ave anoshanda-nzvimbo kutakura nekuchengetedza.
PET French Square mabhodhoro inoratidzira yakasarudzika rectangular mbiri, inowanzo shandiswa yezvigadzirwa zvekudya uye zvimwe zvemabhodhoro zvinonhuwira. Iwo anowanzo shandiswa mukuitwa kweDhairi, asi anogona zvakare kubatsira zvakanyanya mukuchengetedza zvimwe zvinwiwa senge zvinokonzeresa, manyuchi, uye sauces uye nezvakasimba senge DIY musanganiswa, rubs, nezvinonhuwira. Vangagadzira mapakeji akanakisa ekupa zvipo zvakare.
french mabhodhoro epurasitiki
Iyo ChiFrench square plastiki bottle kubva kuCOPAK inzira yakanaka yekuratidzira majusi ako, smoothies, mandimu, mahafi echando, uye zvimwe zvinwiwa zvinozorodza! French sikweya iri kureva bhodhoro rine mativi muviri uye Oblique bendekete. Aya akasiyana anosiyana pakukwirira, vhoriyamu dhizaini, upamhi uye chivharo dhizaini.
OEMODM PET Bhodhoro
OEM inomiririra yekutanga michina yekugadzira uye ODM inomirira Yekutanga Dhizaini Kugadzira. Izvi zvinotsanangurwa uye pakupedzisira zvinopiswa neimwe fem yekutengesa. Makambani akadaro anotendera iyo femu yemakambani kuburitsa pasina kuita musangano kana kumhanya kwefekitori. Izvi zvinoshandiswa zvakanyanya mumapakeji ezvekudya, zvekuzora, kutarisirwa kwega, mishonga uye zvimwe zvakawanda.
Isu tiri nyanzvi yekugadzira yemabhodhoro ePET uye makapu emapakeji ezvekudya. Mabhodhoro ePET nemikombe zvinogona kuiswa zvinwiwa uye muto. Iced kofi, ice cream, teal, mukaka, milkshakes, smoothies uye zvimwe zvinwiwa zvinogona zvakare kuzara. Ivo anowanzo shandiswa mumabhawa, zvekudya zvinokurumidza, zvitoro zve smoothie zvichingodaro. Uye isu takabudirira kushandira pamweOEM / ODM PET bhodhoro nemaketani mazhinji ane mukurumbira kana zvitoro senge STARBUCKS, KFC, BLUEFROG, MC zvichingodaro.
Polyethylene terephthalate, kana PET, mubatanidzwa unoshandiswa mukugadzira mhando zhinji dzemabhodhoro epurasitiki. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti PET chinwiwa mabhodhoro haana kufanana neBPA (bishenol-A).
PET chinwiwa mabhodhoro ipa yakajeka, isina-streaky kupedzisa uye yakasimba neyakareba kukwenya uye kwakanyanya kupwanya kuramba. Polyethylene terephthalate plastiki inowanzo shandiswa pakudya uye mabhodhoro ezvinwiwa sezvo iri semi-solid uye yakapfava kurema. Bhodhoro rePET rakajeka rinoratidza chigadzirwa chako zvakanyanya,
Kana iwe uri mune chinwiwa kana jusi munda, PET chinwiwa Mabhodhoro muChina ndiyo sarudzo yako yekutanga. Uye pakati pevatengesi vePET chinwiwa Mabhodhoro muchina, COPAK ndiyo yaungavimbe nayo.
Shanghai COPAK Viwanda Co, LTD. Yakapfupikiswa "COPAK".
COPAK inyanzvi inogadzira PET makapu AND PET chinwiwa mabhodhoro muchina. Kuve tiri mundima iyi mumakumi emakore, isu takapfumah chiitiko inin kuburitsa mapakeji ezvekudya. Tine mashopu ehurukuro asina makapu emikombe nemabhodhoro.
PET chinwiwa magaba
Kuve anovimbika wepurasitiki bhodhoro mugadziri, COPAK gara uchiita zvatinogona kuzadzisa zvikumbiro kubva kune vatengi vedu.
Tinopa mhando yepamusoro PET chinwiwa magaba izvo zvakagadzirwa nezvinhu zvine simba kuona kugutsikana kubva kune vatengi vedu
COPAK'S PET chinwiwa magaba zvinogadzirwa nePET zvigadzirwa zvemabhodhoro uye Aluminium Easy Open lids; vhoriyamu iri kubva 6oz-20oz.
Zvese zviri pachena uye zvakadhindwa kana chinamirwa PET CHINODZWA MAKANGI zviripo. Tine dhizaini timu pane yemafashoni kumusoro kwesarudzo dzako. Kugadzirwa kwetsika kunotsigirwawo.
PET Chinwiwa Midziyo
PET chinwiwa midziyo akareruka, asingaputsike uye, nekuda kwezvakanakira izvi, anonyanya kushandiswa.
COPAK's PET mudziyo inowanzo gadzirirwa zvinwiwa zvakaita semvura yekunwa, mukaka, kofi, tii, Smoothie, muto uye zvinwiwa. Tine zvese zviri zviviri zviri nyore PET chinwiwa midziyo uye yakadhindwa PET chinwiwa midziyo. Cylinder PET BOTTLE, Square PET mabhodhoro, huchi hwebhegi mabhodhoro, PET MAGANI, PET POP MAKOMBANI, PET Boston mabhodhoro uye zvichingodaro.
Zvese zveCOPAK'S PET chinwiwa midziyo zvinogadzirwa muguruva yemusangano isina musangano uye inosangana nematanho epasi rose ezvokudya. Isu takavimbika mugadziri uye tine akakwana aftersales sevhisi system. Zvese zvichemo zvako zvichagadziriswa.
The PET mabhodhoro isarudzo huru yezvinoshambidza, makemikari epamba, mafuta ekuzora, zvekugezesa, hutano uye zvigadzirwa zvekunaka, confectionery, mafuta anodyiwa / sosi nezvimwe. Uye inogona kurega runako rwechigadzirwa chako kuratidze kuburikidza.
Yedu yemhando yepamusoro, yakajeka mabhodhoro epurasitiki ePET anokwanisa kugadziriswazve, akareruka uye giredhi rekudya rinotenderwa. PET ipurasitiki ine girazi-rinotaridzika, iro rakanakira kusimudzira akasiyana siyana zvigadzirwa. Iyo yakajeka facade yegirazi inobvumira vatengi vako kuti vaone zvirimo - saka zvakanakira kurongedza zvinokwezva zvinwiwa kana mafuta.